ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ဘုရားနီရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ်မြုပ် ~ ဆုံနေကြ
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ဘုရားနီရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ်မြုပ်
Saturday, August 18, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
သာပေါင်း (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်း သာပေါင်းမြို့နယ် ဘုရားနီကျေးရွာတွင် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တည်းက ရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ်မြုပ်လျက်ရှိပြီး ဒေသခံများမှာ ကုန်းမြင့်ဒေသများရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကားလမ်းနဘေးနှင့် ရထားလမ်းတာဘောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ယာယီစခန်းများထိုး၍ နေထိုင်နေကြရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း သာပေါင်းမြို့နယ်ရှိ ဘုရားနီကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပရဝဏ်အတွင်း သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က ရေကြီးလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - မျိုးသန့် - မဇ္ဈိမ) ဘုရားနီကျေးရွာတွင် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တည်းက ရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ်မြုပ်လျက်ရှိပြီး ဒေသခံများမှာ ကုန်းမြင့်ဒေသများရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကားလမ်းနဘေးနှင့် ရထားလမ်းတာဘောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ယာယီစခန်းများထိုး၍ နေထိုင်နေကြရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း သာပေါင်းမြို့နယ်ရှိ ဘုရားနီကျေးရွာ ရေကြီးနစ်မြုပ်လျက်ရှိသည်ကို သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - မျိုးသန့် - မဇ္ဈိမ) ဘုရားနီကျေးရွာတွင် ယခုလ ၈ ရက်နေ့တည်းက ရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ်မြုပ်လျက်ရှိပြီး ဒေသခံများမှာ ကုန်းမြင့်ဒေသများရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကားလမ်းနဘေးနှင့် ရထားလမ်းတာဘောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ယာယီစခန်းများထိုး၍ နေထိုင်နေကြရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ဒါးက တိုက်နယ်ရှိ ရဲစခန်း ရေကြီးနစ်မြုပ်နေသည်ကို သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - မင်းမင်း - မဇ္ဈိမ) ဒါးက ရွာရှိ အိမ်ခြေ ၆၀ မှာ ရေကြီးနေခြင်းကြောင့် ကားလမ်းပေါ်တွင် ယာယီတဲများထိုး၍ နေထိုင်နေကြရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် ဒါးက တိုက်နယ်ရှိ ပုသိမ် ဒါးက ကားလမ်းပိုင်း တနေရာ ရေကျော်နေသည်ကို သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - မင်းမင်း - မဇ္ဈိမ) ဒါးက ရွာရှိ အိမ်ခြေ ၆၀ မှာ ရေကြီးနေခြင်းကြောင့် ကားလမ်းပေါ်တွင် ယာယီတဲများထိုး၍ နေထိုင်နေကြရသည်။
အိမ်ခြေ ၃၂၆ လုံး၊ လူဦးရေ ၁၄၆၆ ယောက်တို့သည် ပုသိမ်- ကြံခင်း ရထားလမ်း၊ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းနှင့် ကုန်းမြင့်နေရာဖြစ်သည့် ဒေသအခေါ် ဘက်ဖိုးတာဘောင် တို့တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စခန်း လေးခုဆောက်လုပ်၍
ယင်းအပြင် ကုန်းမြင့်ဒေသများရှိ နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများဖြစ်သည့် သပြေကျွန်းရွာ၊ ဒါးကရွာ၊ မန္တလေးကုန်းရွာများရှိ
"သူပြောင်းချင်တဲ့နေရာ ပြောင်း၊ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့နေရာကို ပြောင်းပေါ့။ ကားလမ်းဘေး ရေလွတ်ရာမှာလည်း တဲလေးတွေ ထိုးပြီးတော့ နေကြရပါတယ်။ သူတို့ကလည်း နေလို့ရသလောက် ကပ်နေကြတယ်။ အခု ပြောင်းတာ
က မလွဲသာလို့ ပြောင်းရတာ။ အဲဒီအခြေအနေကျမှ ပြောင်းကြတာ။" ဟု ဘုရားနီး ကျေးရွာ စာရေးဖြစ်သူ ဦးမြစိုးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြေပြင်မှ အိမ်ခေါင်မိုးအထိ ပေ ၂၀ အမြင့်ရှိသည့် အိမ်များမှာ အိမ်ခေါင်မိုးသာ မြင်ရတော့ပြီး ယခု ရေကြီးမှုသည် ရှစ်နှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်သည်ဟုလည်း ရွာလူကြီးတဦးဖြစ်သူ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် ဦးမောင်မြင့်
"ဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့ရေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ပဲ ကြုံဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီထက် နည်းနည်းပိုတယ် အဲဒီတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ နေခဲ့ရပါတယ်။" ဟု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ယာယီတည်းခိုစခန်းတွင် ရောက်ရှိနေသူ ဦးမြစိုးက ပြော
ဒေသခံများမှာ လုံလောက်သည့် အကူအညီမရဘဲဖြစ်နေပြီး စားစရာ ဆန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး
လေးပါးကျောင်းထိုင်သည့် ထိုရွာတွင် ဘုန်းကြီးများအတွက် ဆွမ်းအခက်အခဲပင် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဦးမြစိုးက ပြော
"အဲဒီလိုဖြစ်နေတော့ အင်္ဂလိပ်လို ၆ ရက်နေ့က ဘုန်းကြီးတွေ ဆန်ပြုတ်ပြုတ်သောက်ရတဲ့ အနေအထားမျိုး
ရောက်ခဲ့တယ်။" ဟု ဦးမြစိုးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အကူအညီများကို ကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ယခုလ ၉ ရက်နေ့နှင့် ၁၂ ရက်နေ့များတွင် ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းနှင့် ယာယီဆေးပေးခန်းရှိ အိမ်ထောင်စု ၁၅၈ စုအတွက် ဆန်တပြည်စီနှင့် ယမ်ယမ် ခေါက်ဆွဲခြောက်
နှစ်ထုပ်စီသာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သာပေါင်းမြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်စမ်းစမ်းဝင်းမှလည်း ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အိမ်ထောင်စု ၈၆ စုအတွက် ဆန်တပြည်ကျစီ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
ဒေသခံများအတွက် စားစရာ ဆန်အခက်အခဲအပြင် ချက်ပြုတ်ရာတွင် သုံးသည့် ထင်းမှာလည်း ရေကြီးနေခြင်း
ကြောင့် ရှားပါးနေသည့် ပြဿနာ ရှိနေသည်ဟု ရွာလူကြီးဖြစ်သူ ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။
"အခုကတော့ အိမ်က ဝါးတွေချိုးပြီး မီးကင် ကြပ်တိုက်ပြီးတော့ အခြောက်ခံပြီး ချက်ရပါတယ်။ ညက ၁၁ နာရီလောက်မှ ချက်စားရတဲ့လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ထင်းမရှိလို့။" ဟု မဇ္ဈိမကိုပြော
သာပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ နွယ်နီချောင်း၊ အုတ်ရှစ်၊ လင်းတကျ၊ အလယ်ကျွန်း၊ လှေကြီးပျက်၊ ကြက်သွန်ကွင်း၊ သမင်ကုန်း၊ စစ်ပင်ကြီး၊ ကညင်ပင်၊ မကျည်းကုန်း၊ ရေလဲကြီး၊ သပြေကျွန်း၊ တကူပုံ စသည့်ရွာပေါင်း ၄၀ ကျော်
သည်လည်း ယခုလ ၈ ရက်နေ့ကတည်းက ရေကြီးနစ်မြုပ်လျက်ရှိသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ကျောင်းကုန်း၊ ကန်ကြီးထောင့်၊ သာပေါင်း၊ ပန်းတနော်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်များတွင်လည်း
အစကကြိုသိခဲ့ ရင်လေ မစားခဲ့ ပါဘူး ခင်ရီရယ် ....
သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်း အနီးရှိ ရေထွက်မြောင်း ပိတ်ဆို့...
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၃/ ၂၀၁၂...
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ရပ် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ)ြ...
မိုးထိမိုးမိမှာ လူမိုက်အင်အား ၂၀၀ သောင်းကျန်
ဦးအောင်သိန်းလင်း အမတ်ဖြစ်မှ ရုတ်သိမ်းပေးရန် ကော်မ...
ဧရာဝတီတိုင်း၏ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း ရေမြုပ်နေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ နိုင်ငံတော်သမ္မတ...
ခုံရုံးအငြင်းပွားမှုတွင် ဥပဒေအဆုံးအဖြတ် ခံယူမည်ဟု ခ...
ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ကန့်ကွက်ရန် မဲဆန္ဒရှင်လက်မှတ် ...
Custom ROM ဆိုတာ ဘာလဲ
ADSLအင်တာနက်လိုင်းအမြန်နှုန်းကို အခမဲ့ ၂ ဆတိုးမြှင်...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်...
ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ကလေးငယ်မျာ...
တခြား ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ နည်းတူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်...
ကုလားချောင်းကို ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်ခဲ့သူများထံမှ သက်သေ...
ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း အတည်ပြုထားသည့် နည်းလမ်...
"ကမ္ဘာ့ သည်းခံအားအကောင်းဆုံးလူမျိုး . . ."
ယနေ့ (သြဂုတ်လ ၂၀ရက်နေ့) တွင် ကျင်းပမည့် အမျိုးသားလ...
သတင်းဂျာနယ် ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေး စာပေများ စာေ...
ရေကြီးမှုအခြေအနေ ဆိုးရွားလာ၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လယ်ယြာေ...
မြန်မာ ပြည် ဒေသများ ရေ ကြီး နေမှု များ..
လုပ်ကြံဖေါ်ပြထားတဲ့ ဗွီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံများ ပါကစ္စတန်မ...
မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ ကြီ...
ရခိုင်ဒေသအတွက် ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ဘုရားနီရွာလုံးကျွတ် ရေကြီးနစ...
ပဋိပက္ခကြောင့် ပညာရေး၊ ကျောင်းဆရာ/မများနှင့် ကျောင်...
အစိုးရ၏ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုသည်မှာ KNU ဆက်ဆံရေ...
အမျိုးသမီးကဗျာ (သီးသန့်)၊ ဆိုကရေးတီး (၁၉) နဲ့ ၈၈ ရ...
အနော်ရထာ စက်မှုဇုန် မြေသိမ်း နစ်နာကြေး မပြေလည်သေး
ပြည်သူကိုလိမ်ညာပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပိုက်ဆံယူနေတဲ့...
Religion of Peace ဆိုပြီး မငြိမ်းချမ်းတဲ့ အဖျက်လုပ...
မျိုးဆက်သစ်လို့ ဆိုကြရာမှာ . . . (ဆောင်းပါး – ရဲဘေ...
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တို့ အကြား ပဋိပက္ခ ကြီ...
ကျပ် သိန်း ၅၀အထိ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မည့် MPU De...
လူထု ဦးစိန်ဝင်း စာမူများ သမီးဖြစ်သူထံ ခွင့်တောင်း...
အစိုးရ၏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသည် တဖက်သတ် အမြတ် ထုတ်ရေး...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် ၀င်ရေ...
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ကွ ....ခုတိုင်...ခုပြုတ်...ပဲ...!!!...
FMI City ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားဟောင်းတွေ ဆန္ဒပြ
ဆားလင်းကြီးမြို့ ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် လယ်ယာမြေများ...
သတင်းမီဒီယာများ ဒုတိယအကြိမ် ဆန္ဒပြမည်
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီမှ အချက် ၆ ချက်ပါ အထူးထုတ်...
၈၈မျိုးဆက်တွေရဲ့ တေးဂီတပွဲ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ က...
ရခိုင်ကဲ့သို့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ကျေ...
ရခိုင်အရေး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သားများအရေး ILO ညှိနှိုင်းပေးမည...
မိုးထိမိုးမိ အလုပ်သမားတွေ အိုင်အယ်လ်အိုမှာ တိုင်ကြ...
မြန်မာ့အလင်းကို ထုတ်ဝေသူ နှစ်ယောက်ထုတ်နေတာလား..။ ဒ...
ဦးအောင်သိန်းလင်းအမှု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရှင်းချက်ထုတ...
ဆရာစံတောင်စံပြရပ်ကွက် NLD ရပ်/ကျေးရုံးဖွင့်
ဈေးဝယ်ငွေထုတ် ကဒ်များ နောက်လထွက်မည်
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ လိပ်သောင်များ ဆယ်စုနှစ်တခုအတ...
လောင်းလုံ ရေနံစက်ရုံအတွက် ဥယျာဉ်ခြံမြေများ အသိမ်းခ...
ရွှေပြည်သာနှင့် လှိုင်သာယာ လယ်သမားတို့ လျော်ကြေးရလို...
ပုံစံတူ လူသတ်မှုကြောင့် ကျောက်ပန်းတောင်း ဒေသခံများ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြ...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုသည် အစိုးရ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ နိုင်ငံ၏ ဂုဏ...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဉာဏ်ထွန်း ဒုသမ္မတအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန...
ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ တိုင်းပြည်အာဏာဟာ ပြည်သူ့ထံက လာတယ...
မြန်မာအစိုးရကို ဘီဂျေနမ်ဘီးယား ချီးကျူး
ပြည်တွင်းမီဒီယာများ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အခက်အခဲ ကြုံ...
ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး၊ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ.......
အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တစ်ပတ်အ...
ကမ္ဘာ့မူဆလင် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက မြန်မာအစိုးရကို ပန်ြ...
Mozilla Firefox ထက်ဆယ်ဆ မြန်တဲ့ Maxthon 3
ရခိုင် စာသင်ကျောင်းများ ပြုပြုရေး ဂီတရန်ပုံငွေပွဲ ...
ညောင်လေးပင်နှင့် ကဝမြို့နယ် စပါးစိုက်ဧက တသောင်းကျေ...
"၈.၈.၈၈"အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြိုအထိမ်းအမှတ် ၈၈မျိုး...
ယနေ့( သြဂုတ်လ ၇ ရက်)ညနေ ၄း၃၀ နာရီက ၈၈၈၈အရေးတော်ပုံ...
တပြည်လုံး ခိုင်မာဝဖြိုးစေဖို့...မြို့တွေကို ဒီလို ...
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ အမည်းရောင...
ရခိုင်အရေး အတွက် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ရ...
မြန်မာ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် RSF စိုးရိမ်
ယနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ( ၇ -၈- ၂၀၁၂ )
ပြည်ထောင်စု အဆင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိ...
ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၃)
ငါတို့ အားလုံးရဲ့ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ...
အပေါက်ဝရွာနှင့် ရွှေလင်ရွာများရှိ အိမ်ခြေ ၄၅၀ ကျော်...